Tale jeneralin’ny Samifin, Lamina Boto Tsara Dia: « Tandindonin-doza isika raha tsy mandray andraikitra ny parlemanta” | NewsMada
Tale jeneralin’ny Samifin, Lamina Boto Tsara Dia: « Tandindonin-doza isika raha tsy mandray andraikitra ny parlemanta”
Nivahin’ny tao amin’ny fandaharana “Ambarao” ao amin’ny radio Alliance 92 FM ny tale jeneralin’ny Samifin, Lamina Boto Tsara Dia, omaly. Nambarany fa mampanahy ny tsy mbola nandanian’ny parlemanta ny lalàna momba ny ady atao amin’ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola ny fampihorohoana.
Mbola mihantona eny anivon’ny parlemanta, amin’izao fotoana izao, ny volavolan-dalana momba ny ady atao amin’ny famotsiam-bola sy ny ady atao amin’ny famatsiam-bola ny fampihorohoroana ary ny lalàna momba ny fahazoana harena tamin’ny fomba tsy ara-dalàna. Mametraka ny ahiahiny ny tale jeneralin’ny Samifin, manoloana izany. “Nanaovan’ny sehatra iraisam-pirenena tombana ezaka isika ka hita fa tsy mifanaraka amin’ny fenitra maneran-tany ny lalàna sy ny fomba fiasantsika amin’ireo ady ireo. Vokany, tafiditra ao anatin’ny fanaraha-maso hentitra isika izao”, hoy izy. Notsiahivina fa andrasana ato anatin’ny herintaona, nanomboka ny volana jona teo ny momba izany lalàna izany sy ny fanarenana ny lalàna ary ny fomba fiasa mba hifanaraka amin’ny fenitra iraisam pirenena. Ho tafiditra ao anatin’ilay “liste grise”, izany hoe firenena ahitana lesoka lehibe sy tsy miezaka hanarina ny ady amin’ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola ny asa fampihorohoroana isika rehefa tsy ahitana ezaka, araka ny nambarany.
Manome endrika ratsy ny firenena
Nohitsiny fa manome endrika ratsy ny firenentsika izany. Eo amin’ny toekarena, harahi-maso hentitra ny vola miditra sy mivoaka ary misy sandany ka mihalafo kokoa ny fifamezivezen’ny vola eto amintsika. Misy akony amin’ny firenena izany satria miankina amin’ny fanondranana sy fanafarana entana ny toekarentsika. Mitombo ny vola aloan’ny mpandrahara any amin’ny banky ary misy aza tsy handray ny vola mivoaka avy aty amintsika sy ny vola miditra eto. “ Tandindonin-doza ny firenena. Tsy miera amintsika ny iraisam-pirenena hampiditra antsika amin’izany karazana lisitra mainty izany. Tsotra ny azy ireo. Vita ilay lalàna mifanaraka amin’ny fenitra tadiavina sy ny ezaka ary nahomby ilay firenena amin’ny fampiharana ny lalàna. Fantatry ny mpandraharaha eto amintsika izany”, hoy ihany izy…
Tsy manana finiavana ny mpanao politika fa sakana
Nambarany fa ilaina ny fanavaozana sy ny fanitsiana lalàna mba hifanaraka amin’ny iraka ataon’ny Samifin. Sakana amin’ny fananana lalàna ireo mpanao politika, araka ny fanamafisany. “Mitaky vokatra aminay izy ireo nefa ny fitaovana iasana aza tsy omena anay. Tsy misy finiavana politika sy tsy mazava ny laharam-pahamehana amin’izy ireo”, hoy izy. Notsindriny fa manana anjara amin’izany ny fanjakana sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpandraharaha hanery ireo parlemantera ireo handray ny andraikiny satria efa misy loza mitatao eto amin’ny firenena. “Tompon’andraikitra amin’ny tantara izy ireo raha mihatra amintsika ny fampidirana antsika anaty listry ny firenena ratsy endrika amin’ny ady amin’ny famotsiam-bola…”, hoy ny tale jeneralin’ny Samifin.
Ny Samifin sy ny vola amin’ny fifidianana
Ankoatra izany, nanteriny fa manana andraikitra amin’ny fifidianana ny Samifin, araka ny voalazan’ny lalàm-pifidianana, indrindra ny momba ny vola mifandray amin’ny famotsiam- bola. “Mandray ny andraikitra izahay raha misy fanambarana ahiahy mifandray amin’ny famotsim-bola nampiasaina amin’ny fifidianana. Manao ny fanadihadiana izahay”, hoy izy. Na izany aza, nambarany fa zava-dehibe ny fisorohana amin’ny alalan’ny fanentanana sy ny fanoroana ny fepetra azo raisina tsy hidiran’ny famotsiambola amin’ny fifidianana. Mifanome tanana amin’ilay vaomiera mpanara-maso ny volan’ny kandidà ny Samifin ao anatin’izany. Ohatra, ny namoriana ny mpilatsaka hofidina sy ny mpitahiry volan’ny kandidà. Nambarany fa asa mitohy ny azy ireo ary mandray fanambarana ahiahy avy amin’ io vaomiera ny Samifin raha misy ilana ny fanadihadiana. “Tsy amin’ny resaka fifidianana ihany ny asanay. Manao ny asanay izahay amin’ny mety ho fivezivezen’ny vola na mifandray na tsia amin’ny fifidianana. Eo ny fananana tahirim-baovao fa mandray ny vaovao rehetra manodidina ny famotsiam-bola koa izahay… Manao ny asanay hatrany na misy na tsia ny fifidianana”, hoy izy.